Ohatrinona ny mandeha any Colombia? - ALinks
Raha mitady toeran-teti-bola ho an'ny dia ianao dia mifanaraka amin'ny faktiora i Kolombia. I Kolombia dia mety ho iray amin'ireo firenena mora vidy indrindra nalehanay nefa tsy midika izany fa tsy ho tia isan-tsegondra ianao. Misy endrika marobe toy izany, hetsika misy, ary fialamboly miaraka amin'ny kolontsaina manankarena azo antoka fa mamono totoka!
Mandritra ny 30 andro eo ho eo, ny fandaniana dia $2,908.50 USD, na $78.60 isan'andro. Toy izao ny fandravana izany:
Fonenana - COP 3,690,531 ($ 1122.10 USD)
Sakafo - COP 3,231,903 ($ 982.66 USD)
Zava-pisotro (Starbucks, rano, dite sns) - COP 183,488 55.78 ($ XNUMX USD)
Zava-pisotro misy alikaola - 691,170 COP ($ 210.15 USD)
Taxi - 386,000 COP ($ 117.36 USD)
Fitateram-bahoaka - COP 37,000 ($ 11.25 USD)
Fiara fitateram-bahoaka - COP 238,200 ($ 72.42 USD)
Fitsangatsanganana an-tongotra / andro- 541,500 164.64 COP ($ XNUMX USD)
Miscellany (Band-Aids, savony sns) - COP 47,650 ($ 14.48 USD)
Arakaraka ny fivezivezenao no mampisondrotra ny tetibola. Raha mila mampihena ny vidiny ianao dia aza hadino ny mitsidika toerana vitsivitsy.
Ity fanapahana teti-bola ho an'i Colombia ity dia tsy misy ny sidina iraisam-pirenena eto amintsika. Mazava ho azy fa hiovaova arakaraka ny niavianao ireo, ka ianao irery ihany no mila mamaritra azy. Tena mamporisika ny sidina Google izahay hahita ny vidiny tsara indrindra.
COP354,980 (eo amin'ny $ 114.38 USD) - sidina VivaColombia avy any Medellin mankany Santa Marta.
$ 42.53 USD - Bisy Bolivariano avy any Bogota mankany Salento
COP94,000 (eo ho eo $ 30.29 USD) - Bus avy any Salento mankany Medellin
COP84,000 (eo ho eo $ 27.07 USD) - Mirasol bus avy any Santa Marta mankany Cartagena
COP40,000 (eo ho eo $ 12.89 USD) - taxi avy any amin'ny seranam-piara-manidina any Bogota mankany amin'ny la Candelaria
COP70,000 (eo ho eo $ 22.55 USD) - taxi avy any Medellin mankany amin'ny seranam-piaramanidina Jose Maria Cordova
Ny totalin'ny fandehanay nankany Colombia dia $ 1482.57 USD.
$ 41.18 USD isan'olona isan'andro.
Ny ankamaroan'ny efitrano fandraisam-bahiny any Kolombia dia mitentina eo anelanelan'ny ($9-14 USD) isan'alina. Na dia azonao atao aza ny mahita azy ireo amin'ny 23,048 COP ($7 USD) any amin'ny tanàna sy tanàna kely kokoa. Any amin'ny tanàn-dehibe dia afaka mahita azy ireo ianao indraindray amin'ny vidiny ambany. Saingy matetika ny fitaovana dia somary mediocre. Ny efitrano fandraisam-bahiny tsy miankina dia manomboka eo amin'ny ($15.50 USD), na dia manantena ny handoa avo roa heny aza mandritra ny vanim-potoana faran'izay mafy. Manomboka amin'ny 60,000 COP eo ho eo ($18 USD) isan'alina ny hotely tetibola Kolombiana. Eo amoron-dranomasina sy mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, ny ankamaroan'ny trano fonenana dia mitentina manodidina ny 120,000 ($36 USD) isan'alina.
Mitentina eo anelanelan'ny 10,000 sy 15,000 COP ($3-5 USD) isaky ny sakafo hariva ny ankamaroan'ny sakafo mahavelona. Any ambanivohitra, afaka mahita betsaka ianao amin'ny 5,000-10,000 eo ho eo ($1.50-3 USD). Misy ihany koa ny sakafo mora azo, toy ny empanadas, amin'ny ($0.06-0.15 USD) (izy ireo no manao ny sakafo hanina tsara indrindra). Teny an-dalana, ny arepa iray dia mitentina manodidina ny 3,000 COP ($0.90 USD). Manodidina ny 15,000 COP ($4.55 USD) ny vidin'ny Ceviche ary malaza manerana ny firenena.
Ny ankamaroan'ny sakafo "Tandrefana" dia hamerina anao eo anelanelan'ny $6 ka hatramin'ny 9 USD isan'olona. Na 15,000 $4.55 USD raha manafatra sakafo haingana avy amin'ny McDonald's na Metro ianao. Ny sakafo ao amin'ny firenena dia mety ho lafo be, ka ny vidiny dia miakatra avy eo.
Ny labiera ao amin'ny trano fisotroana dia mety mitentina 2,500 COP ($0.75 USD), saingy azo antoka fa handoa avo roa heny noho izany ianao amin'ny trano fisotroana backpacker. Manodidina ny 20,000 COP ($6 USD) no vidin'ny cocktails ary miha-malaza any Kolombia.
Ny fitaterana eo an-toerana dia ara-drariny vidiny. Ny tapakila metro iray mandeha any Medellin dia mitentina eo amin'ny 2,500 COP ($0.76 USD). Any an-tanàn-dehibe, ny fiara fitateram-bahoaka no karazana fitaterana matetika indrindra. Ny saran-dalana dia manomboka amin'ny 1,000 ka hatramin'ny 2,5000 COP ($0.30-0.80 USD).
Ny Uber dia lafo kokoa noho ny taxi, ary azonao atao ny mahazo azy saika hatraiza hatraiza amin'ny $5 USD eo ho eo.
Ny fomba fitaterana tsara indrindra any Kolombia dia fiara fitateram-bahoaka. Ny fiara fitateram-bahoaka avy any Bogotá mankany Medellin dia mitentina $20 USD eo ho eo. Raha ny fiara fitateram-bahoaka avy any Bogota mankany Quito, Ekoatera dia mitentina eo amin'ny 175,000 COP ($54 USD). 42,000 COP ($12.75 USD) ny fandehanana avy any Medellin mankany Manizales, ary 27,000 COP ($8.20 USD) ny fandehanana avy any Salento mankany Cali.
Ny vidin'ny fitsangantsanganana mahazatra ho an'i Kolombia
Ohatrinona ny vidin'ny fitsidihana an'i Colombia? Matetika ny fitsangatsanganana an-andro dia fomba iray mahomby hijerena ireo zava-nisongadinan'ny firenena na faritra iray.
Contiki fitsangatsanganana ho an`ny tanora 18-35 taona
G AdventuresFitsangatsanganana sy fitsangatsanganana ara-kolontsaina
be herim-poFitsangatsangana vondrona kely ho an'ny rehetra
#Torohevitra hitahiry ny volanao
Ireto misy soso-kevitra hitsitsiana vola ho an'i Kolombia:
Mihinana toy ny eo an-toerana - Ny fifikitra amin'ny sakafo Kolombiana nentim-paharazana dia hitazona anao amin'ny teti-bola. Misy ihany koa ny sakafo mora azo, toy ny empanadas, amin'ny $ 0.06-0.15 USD. Teny an-dalana, ny arepa iray dia mitentina manodidina ny 3,000 COP ($0.90 USD). Raha fintinina dia misakafo eo an-toerana ary misakafo mora. Ny sakafo Kolombiana dia tsy mahasalama indrindra, fa mameno sy mora vidy.
Mifampiraharaha amin'ny mpamily taxi
Tsy manana metatra i Kolombia. Raha ny vidin'ny seranam-piaramanidina dia efa napetraka ary tsy afaka ovay. Fa ny zavatra hafa rehetra dia miankina aminao sy ny fahaizanao mifampiraharaha. Raha maka taxi ianao dia mividiana varotra alohan'ny hidirana ao anaty fiara.
Alefaso ny cocktails
Kolombia ankehitriny dia mirehareha amin'ny trano fisotroana cocktail be dia be, indrindra any Medelln. Saingy lafo ireo zava-pisotro ireo, mitentina manodidina ny 20,000 COP ($6 USD) amin'ny antsalany (ary hatramin'ny 30,000 COP, na $9 USD amin'ny fotoana tsy fahita firy). Adala izany, indrindra rehefa mitentina 4,000 COP eo ho eo ny fisotroana (1.25 USD). Raha toa ka tery ny teti-bola, ialao ny cocktails ary mifikitra amin'ny labiera.
Manidina Viva Air
Raha te hitsidika an'i Kolombia ianao dia manana tolotra lehibe indrindra ny Viva Air. Izy io dia manolotra ny saram-piaramanidina mora indrindra ao amin'ny firenena (na dia manidina any amin'ny toerana vitsy indrindra aza). Aleo manao famandrihana herinandro vitsivitsy mialoha ny fotoana. (LAN sy Avianca, mpitatitra roa manan-danja, manana fifanarahana ihany koa indraindray.)
saran'ny dia mankany KolombiaOhatrinona ny saran-dalana mankany Kolombia
Ahoana ny fifindra-monina any Eropa?
banky amin'ny grika
Fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Hong Kong
Febroary 10, 2020
Ahoana ny fomba hahazoana Visa mpizahatany any Malezia?
Ahoana ny fomba fangatahana trano maharitra any Canada avy any ivelan'i Kanada?
Ahoana ny fomba fangatahana fangatahana fialokalofana any Kroasia?